Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo taliyeyaal ciidan oo gaaray Jowhar iyo kulamo halkaasi ka socda - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo taliyeyaal ciidan oo gaaray Jowhar iyo kulamo halkaasi ka socda
Wararka naga soo gaarayo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in halkaasi ay maanta gaareen wafdi ka kooban taliyeyaasha ciidamada iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dalka.
Xubnaha wafdigaasi ayaa sida la sheegay ka mid ahaa taliyaha ciidamada booliska Jeneraal Maxamed Sheekh, taliyaha hay’adda nabad-sugidda ee NISA Jeneraal C/laahi Gaafow iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Cumar Dhagey, waxaana sidoo kale safarkooda ku wehliyay saraakiil kale.
Socdaalka madaxdaan ay maana ku tageen magaalada Jowhar ayaa la sheegayaa in uljeedkiisu yahay arrimo la xiriirto shaqaaqadii amni darro ee dhawaantaan ka dhacday xarunta doorashada magaalada Jowhar, taasoo keentay in la hakiyo dhamaan howlihii doorashada ee ka socotay maamuka Hirshabeele.
Warar soo baxaaya ayaa sheegaya in dib u habeyn lagu sameyn doonno xaaladda ammaan ee goobaha doorashada lagu qabanaayo magaalada Jowhar, iyadoona sharciyo cusub laga soo saarayo hubka ay wataan ilaalada musharixiinta halkaasi imaanaysa.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka dadban ee Hirshabeele ayaa dhawaan hakiyay gebi ahaan doorashadii ka socotay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, iyagoona markii dambe soo saaray go’aan ah in doorashadaasi dib loo bilaabi doonno maalinta Arbacada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23-ka November.